knowledge – media sport
[Zawgyi]ယခုတိုင်ကျော်ကြားနေဆဲဖြစ်တဲ့ ကမ္ဘာကျော် ပေါ့ဘုရင်ကြီး မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ရဲ့အကြောင်း ၁၉၅၈-ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ၊ (၂၉)ရက်၊ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ အင်ဒီယားနားပြည်နယ်၊ ဂရေးအရပ်တွင် မွေးဖွားသည်။ မိဘများမှာ Joseph Walter (Joe) နှင့် Katherine Esther တို့ဖြစ်သည်။ မွေးချင်း ကိုးယောက်တွင် ခုနှစ်ယောက်မြောက် သားဖြစ်သည်။ ငယ်အမည်မှာ Michael Joseph Jackson ဖြစ်သည်။ ညီမအငယ်ဆုံးမှာ ဂျက်နက်ဂျက်ဆင်(Janet Jackson)ဖြစ်သည်။ မိုက်ကယ်လ်၏ အရပ်မှာ ငါးပေဆယ်လက်မ (1.78 m) ဖြစ်သည်။ ၁၉၆၃-ခုနှစ်တွင် ညီအစ်ကိုများနှင့် အတူ The Jackson Five အဖွဲ့နှင့် ကလေးဘဝကတည်းက သီချင်းသီဆိုမှု စတင်ခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အဖွဲ့ကို The Jackson ဟု အမည်ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အဖွဲ့နှင့် အတူ
ဥာဏ်​ရည်​ မမီသူအား သားမယားပြုကျင့်​ သူ အလုပ်​နှင့်​ ​ထောင်​ဒဏ်​ အနှစ်​ ၂၀ ချမှတ်​။
ဥာဏ်​ရည်​ မမီသူအား သားမယားပြုကျင့်​ သူ အလုပ်​နှင့်​ ​ထောင်​ဒဏ်​ အနှစ်​ ၂၀ ချမှတ်​။ ========= ၂၀၁၇ ခုနှစ်​ ဇွန်​လ ၁၇ ရက်​ ည​နေ ၄ နာရီ က ​တောင်​တွင်းကြီးမြို့နယ်​ …..​ကျေးရွာ ​နေ​ဒေါ်…..၄၄ နှစ်​၏ သမီး ငယ်​ဖြစ်​သူ မ……၁၇ နှစ်​ ၈ တန်း​ကျောင်းသူ(​မွေးရာပါ ဥာဏ်​ရည်​ မမီသူ)အား အိမ်​တွင်​ အလုပ်​လုပ်​သူ ဦး​ရွှေမန်းကြည်​ ၄၉ နှစ်​က ​နေအိမ်​ မီးဖိုခန်းအတွင်း သားမယားအဖြစ်​ ပြုကျင့်​ ခဲ့ပြီး ၊သမီးကြီးဖြစ်​သူ မ…..က ဖုံးဆက်​​ပြောပြသဖြင့်​ ​ဒေါ်……က သမီး ငယ်​ ဖြစ်​သူ မ…..အား ​မေးမြန်းရာ သားမယားအဖြစ်​ ပြုကျင့်​ ခဲ့​ကြောင်း နှင့်​ ယခင်​ကလည်း
ဒူးရင်း ၀ယ် တဲ့ အခါ ဒီ အချက်(၃)ချက် ကို ကြည့်ပြီးေ ရွး ၀ယ် ပါ။
[Zawgyi] ဒူးရင်း ၀ယ် တဲ့ အခါ ဒီ အချက်(၃)ချက် ကို ကြည့်ပြီးေ ရွး ၀ယ် ပါ။ ဒူးရင်းသီးဝယ်တိုင်းအဆင်မပြေလို့ဒူးရင်းသီးဝယ်ရင်ဘယ်လိုကြည့်ဝယ်ရတာလဲမေးလာလို့ ဒူးရင်းသီး ဘယ်လိုရွေးမလဲ ဒူးရင်းဝယ်တဲ့အခါ အချက်(၃)ချက်ကို ကြည့်ပြီးရွေးဝယ်ပါ။ (၁) ဒူးရင်းသီးရဲ့ဆူးတွေဟာတိုနေရပါမယ်။ (၂) ဒူးရင်းသီးရဲ့ ဆူးလိုင်းတွေဟာ ကျဲနေရပါမယ်။ (၃) ဒူးရင်းသီးရဲ့ အညှာဟာ ဖြောင့်တန်းနေရပါမယ်။ ဒီအချက်(၃)ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဒူးရင်းသီးတွေဟာ အနံ့၊ အရသာတွေနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ ဒူးရင်းသီးကောင်းတစ်လုံးရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်တွေပါပဲ။ ဒူးရင်းသီးမှည့် မမှည့်ဆိုတာ အချက်(၂)ချက်နဲ့ သိနိုင်ပါတယ်။ (၁) ဒူးရင်းသီးကိုနမ်းကြည့်ပြီး မှဲ့မမှဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ လှိုင်လှိုင်မွှေးနေပြီဆိုရင် အသင့်စားလို့ရနေပြီဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။ o (၂) ဒူးရင်းသီးကို လှုပ်ခါကြည့်ရင်လည်း မှဲ့ မမှဲ့သိနိုင်ပါတယ်။ မှဲ့နေပြီဖြစ်တဲ့ ဒူးရင်းသီးဟာအတွင်းကအဆံဟာ မသိမသာလေး
အိမ် တအိမ် မှာ စီးပွား ပျက်ပြီး လူေ သ တဲ့ အ ထိ ဒုက္ခေ ပး တဲ့ အလွန်ကြောက် စ ရာေ ကာင်းေ သာ ပင်လယ် ကူး သ စ် အကြောင်း
[Zawgyi]အိမ် တအိမ် မှာ စီးပွား ပျက်ပြီး လူေ သ တဲ့ အ ထိ ဒုက္ခေ ပး တဲ့ အလွန်ကြောက် စ ရာေ ကာင်းေ သာ ပင်လယ် ကူး သ စ် အကြောင်း အဲ့ဒါ အိမ်တစ်အိမ်မှာ ပင်လယ်ကူးလို့ခေါ်တယ်၊ အလွန် ခိုက်ပါတယ်..အိုက်အိမ်မှာ နေသူများ စီးပွားမဖြစ်တတ်ဘူး။ လူသေသည် အထိအောင် ဒုက္ခ ပေးတတ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ သစ် ကို ဆက်တဲ့နေရာဟာတိုင်ရှိရင် ဆက်လို့ ရပါတယ်။ တိုင်မရှိပဲ ဆက်ထားရင်တော့ ကျိမ်းသေ ပင်လယ်ကူးအိမ် လို့ခေါ်ပါတယ်။ ရှိနေခဲ့ရင် ချက်ချင်းသာ ပြင်ဖို့လုပ်ပါလေ။ နောက်.. အိမ် ပုခက်လွှဲဆိုတာ ရှိသေးတယ် ခေါင်းရင်း အိမ်နဲ့ ခြေရင်းအိမ်
[Zawgyi]ပြုံးခြင်း ခုနှစ်မျိုး ၁။ မတ၇ားသဖြင့် ခံရတဲ့အခါ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် ပြုံးပါ။ဒါဟာ သဘောထားကြီးခြင်း တစ်မျိုးပါတဲ့။ ၂။ နစ်နာဆုံးရှုံးမှုနဲ့ ကြုံတဲ့အခါ ဆန္ဒရှိရှိ ပြုံးပါ။ဒါဟာ လူတွေကို ခွင့်လွတ်နားလည်ခြင်းတစ်မျိုးပါတဲ့။ ၃။ ရှေ့မတိုး နောက်မဆုတ်သာတဲ့ အခက်အခဲနဲ့ကြုံတဲ့အခါ ခပ်ယဲ့ယဲ့လေး ပြုံးပါ။ ဒါဟာထက်မြက်ခြင်းတစ်မျိုးပါတဲ့။ ၄။ အကူအညီမဲ့တဲ့အခါ ခပ်ပွင့်ပွင့်လေး ပြုံးပါ။, ဒါဟာ စိတ်ကို လှုံ့ဆော်ပေးခြင်းတစ်မျိုးပါတဲ့။ ၅။ ဘေးဒုက္ခကြုံတဲ့အခါ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် ပြုံးပါ။ဒါဟာ စိတ်တည်ငြိမ်ခြင်း တစ်မျိုးပါတဲ့။ ၆။ အပြစ်တင်တာကို ခံရတဲ့အခါ အေးအေးဆေးဆေးပြုံးပါ။ ဒါဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယြုံကည်ခြင်းတစ်မျိုးပါတဲ။ ၇။ အသဲကွဲတဲ့အခါ ခပ်ပေါ့ပေါ့လေးပြုံးပါ။ဒါဟာ တင်းမာမှုကင်းတဲ့ လွတ်လပ်ခြင်း တစ်မျိုးပါတဲ့။ Credit::မူရင်းတင်​သူ FACEBOOK VISIT WEBSITE [Unicode]ပွုံးခွငျး ခုနှဈမြိုး
မြန် မာတွေ ဘာကြောင့် ဆိုင်ပြု တ် သ လဲ ????(မြန်မာတွေကြီးပွားချင်ရင်တော့ ဒီဂါထာလေး နေ့တိုင်းရွတ်။)
[Zawgyi]မြန် မာတွေ ဘာကြောင့် ဆိုင်ပြု တ် သ လဲ ???? လူမျိုးခြား ဘာသာခြားတွေဆိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တယ်။လေး ငါးနှစ်ကြာတဲ့အခါဆိုင်ခွဲတွေထပ်ဖွင့်နိုင်တယ်။ လုပ်ငန်းအထိုင်ကြလို့ ဆယ့်ငါးနှစ်လောက်ကြာရင် ဆိုင်ခွဲအနည်းဆုံးသုံးခုဖြစ်သွားပြီ။ မြန်မာဆိုင်နဲ့ဘေးချင်းယှဉ်လာဖွင့်ရင် မြန်မာဆိုင် သိပ်မကြာခင်ပြုတ်ပြီးပြေးရပြီ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်သုံးဆယ်လောက်က အရောင်းအဝယ်ကောင်းတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာပညာသင်အလုပ်သမားအဖြစ်ဝင်လုပ်ရင်းလေ့လာကြည့်မိတယ်။ အလုပ်ချိန်တိကျတယ်။ဆိုင်ပိတ်ချိန်တစ်ခါတစ်ရံမှာသာနောက်ကျတယ်။နယ်အော်ဒါများလို့ ဒီနေ့ဝင်တဲ့အော်ဒါ ဒီနေ့အပြီးထုတ်တယ်။နေ့ကူးရင် နောက်နေ့အော်ဒါတွေထပ်ပြီး ဂျမ်းမဖြစ်စေဖို့ပါ။ သူဌေးကအစ အလုပ်သမားအဆုံး အကုန်အလုပ်လုပ်တယ်။ဆိုင်မှာသွားပြီးလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင် အာ မရိုက်ဘူး။သောက်ချိန်ရောက်ရင် လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဆယ်မိနစ်ခန့်နားပြီးသောက်တယ်။ သူဌေးအလုပ်က ဆိုင်ရဲ့ပစ္စည်းအဝင်အထွက်ပစ္စည်းအားလုံးခေါင်းထဲမှာ ရှိတယ်။ဆိုင်သမားနဲ့အသက်ကပစ္စည်းရှိရမယ်။စစ်သားရဲ့အသက်က ကျည်ဆံရှိရမယ်လို့အမြဲပြောတဲ့ သူဌေးရဲ့စကား။ ဆိုင်မှာလာအားပေးသူအားလုံးကို နည်းနည်း များများပျူငှာသောဆက်ဆံရေးနဲ့ကြိုဆိုတယ်။ အကြွေးကိုပေးသင့်သူကိုပေးတယ်။မပေးသင့်သူကို လုံးဝမပေးတဲ့မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချနိုင်တယ်။အားနာလို့အားပါသွားတာမျိုးမရှိ။ တိကျမှန်ကန်တဲ့ စာရင်းအင်းရှိတယ်။ဆိုင်ပိတ်ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်း တစ်ပတ်စာ အရောင်းအဝယ်စာရင်းကို ပြန်စစ်တယ်အမှားအယွင်းရှိခဲ့ရင် ကုန်သည်ထံချက်ခြင်းအကြောင်းကြားပေးတယ်။(မှားခဲ့တာတော့ ရှားပါတယ်) ဆိုင်မှာသူဌေးတစ်ယောက်ဘဲရှိတယ်။သူဌေးသားတွေလည်း အလုပ်သမားတွေနဲ့တန်းတူအလုပ်လုပ်ရတယ်။အောက်သက်ကျေအောင် အလုပ်သမားဘဝကိုစာနာတတ်အောင်လုပ်ခိုင်းထားတော့ သူဌေးသားတွေလည်း အလုပ်သမားနဲ့တန်းတူညီအကိုလိုဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်မှာပျော်တော့
ကံထူးရှင်တိုင်း ဒီပို့ကိုတွေ့ ခွင့်ရပြီး ဖတ်နိုင်ရှဲနိုင်ပါလိမ့်မည်
[Zawgyi] ကံထူးရှင်တိုင်း ဒီပို့ကိုတွေ့ ခွင့်ရပြီး ဖတ်နိုင်ရှဲနိုင်ပါလိမ့်မည် ဖတ်သွား ရှဲသွားသူတိုင်း ကမ္ဘာမှာ သန်းပေါင်းများစွာသော လူများထက် ကံကောင်းသောသူ ဖြစ်နေပြီဆိုတာ ဖတ်သွားသူတိုင်း သိသွားပါပြီ..။ သင့် ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ စားစရာရှိနေတယ် ။ ခါးကိုအလှဆင်ဖို့ရာ အဝတ်အစားတွေရှိနေတယ် ။ သင့်ခေါင်းပေါ်မှာ ခေါင်မိုးတစ်ခုရယ် … နောက်ကျောခင်းအိပ်စရာ နေရာတစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုရင်သင်ဟာ ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေထက် ပိုမိုချမ်းသာပါတယ် ။ သင့် ဘဏ်ထဲမှာရော သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာရောနောက်ပြီး အလွယ်သုံးစရာ အကြွေငွေစလေးတွေရှိနေရင် သင်ဟာ ကမ္ဘာမှာ ၈ ရာခိုင်နှုန်းသာလျှင်ရှိတဲ့ …ချမ်းသာသူ စာရင်းဝင်ဖြစ်နေပါပြီ ။ သင်ဟာ ဒီကနေ့မနက်မှာ နေမကောင်းဖျားနာဘာမှမဖြစ်ဘဲ အိပ်ရာက ကျန်းမာစွာ နိုးထလာတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီတစ်ပတ်အတွင်းကမ္ဘာမှာအသက်မရှင်နိုင်တော့တဲ့ သန်းနဲ့ချီ လူတွေထက်ပိုကံကောင်းပါတယ် ။ သင်ဟာ စစ်ပွဲနွဲခဲ့ရတဲ့
[Zawgyi] ကံထူးရှင်တိုင်း ဒီပို့ကိုတွေ့ ခွင့်ရပြီး ဖတ်နိုင်ရှဲနိုင်ပါလိမ့်မည် ဖတ်သွား ရှဲသွားသူတိုင်း ကမ္ဘာမှာ သန်းပေါင်းများစွာသော လူများထက် ကံကောင်းသောသူ ဖြစ်နေပြီဆိုတာ ဖတ်သွားသူတိုင်း သိသွားပါပြီ..။ သင့်​ ရေခဲသေတ္တာထဲမှာ စားစရာရှိနေတယ် ။ ခါးကိုအလှဆင်ဖို့ရာ အဝတ်အစားတွေရှိနေတယ် ။ သင့်ခေါင်းပေါ်မှာ ခေါင်မိုးတစ်ခုရယ် … နောက်ကျောခင်းအိပ်စရာ နေရာတစ်ခုရှိနေတယ်ဆိုရင်သင်ဟာ ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းသောလူတွေထက် ပိုမိုချမ်းသာပါတယ် ။ သင့်​ ဘဏ်ထဲမှာရော သင့်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာရောနောက်ပြီး အလွယ်သုံးစရာ အကြွေငွေစလေးတွေရှိနေရင် သင်ဟာ ကမ္ဘာမှာ ၈ ရာခိုင်နှုန်းသာလျှင်ရှိတဲ့ …ချမ်းသာသူ စာရင်းဝင်ဖြစ်နေပါပြီ ။ သင်​ဟာ ဒီကနေ့မနက်မှာ နေမကောင်းဖျားနာဘာမှမဖြစ်ဘဲ အိပ်ရာက ကျန်းမာစွာ နိုးထလာတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီတစ်ပတ်အတွင်းကမ္ဘာမှာအသက်မရှင်နိုင်တော့တဲ့ သန်းနဲ့ချီ လူတွေထက်ပိုကံကောင်းပါတယ် ။
[Zawgyi]ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်ရဲ့သားကြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည့်ရဲ့သားကြီး မြင့်ဆန်းအောင် (Alexander Aris)အကြောင်း တစေ့တစောင်း နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုတာ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ဘယ်လောက် အရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုတာ လူတိုင်းသိကြ၊ စိတ်ဝင်စားကြပေမယ့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သားကြီး Alexander Aris (ခေါ်) မြင့်ဆန်းအောင်အကြောင်းကိုတော့ စိတ်ဝင်စားသူ နည်းပါးကြပါလိမ့်မယ် ။ ဧပြီ(၁၂)ရက်နေ့ဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သားကြီး Alexander Aris (ခေါ်) မြင့်ဆန်းအောင်ရဲ့ (၄၅)နှစ်ပြည့် မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြင့်ဆန်းအောင် ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ဘ၀ အလှည့်အပြောင်းတွေ၊ သူ့ခံစားချက်တွေကို Myanmar Note ရဲ့ စာဖတ်ပရိသတ်တွေအတွက် ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်..။ “ငယ်စဉ်ဘဝ’’ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ (၁၉၇၂) ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁) ရက်နေ့မှာ ဒေါက်တာ မိုက်ကယ်အဲရစ် နဲ့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခဲ့ပြီး Alexander Aris